SIDEE SI TAXADAR LEH U GOOYAA CAWSKA? - MAQAALLO
Sidee si taxadar leh u gooyaa cawska?
Cawska qumman ee cawska dhalaalaya waa habboon in mulkiilayaasha badan ee guryaha guryaha iyo dacha ay ku dadaalayaan in ay gaaraan. Si kastaba ha noqotee, qof walbaa kuma adkeysan karo "timo", iyo sababta keentay guuldarada badanaa waxay ku jirtaa xulashada qaldan ee cawska cawska.
Noocyada cawska casriga casriga ah
Farsamooyinka laga jarayo cawska, oo ay ku jiraan cawska, waxay leeyihiin dhawr kooxood oo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan meelo kala duwan. Moodooyinka ugu awoodda badan, oo loo aaneyn karo tirada xirfadlayaasha iyo xirfad-yaqaanka, si sahal ah ayey u gooyn karaan afuufaha ugu xoogan, waxay qabtaan goobo ballaaran, inkastoo ay jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin gargaarka. Cannaanka cawsku wuxuu inta badan ka shaqeeyaa gaaska, kaas oo kordhiya dhaqdhaqaaqa.
Noocyada awoodda celcelis ahaan waxay sidoo kale awoodaan in ay xakamaan aag aan caddaalad ahayn oo ka baxsan haramaha, laakiin farsamadan waxaa lagaa rabaa inaad ku qaadato wakhti iyo dadaal badan.
Awoodda hoose (fiilo ama fiilooyinka korantada) ayaa loogu talagalay cawska qallalan ee cawska, oo leh cawska jilicsan, oo laga yaabo in la gooyo waqti ka waqti. Xaaladdan oo kale, waxa ugu muhiimsan maaha inay seegaan wakhtiga goynta - sare ee afkoda si dhakhso ah u koraan oo u adkee mindiyaha.
Waxa aad raadineysid markaad dooranayso sharci-yaqaanada:
Nooca dhaqdhaqaaqa (la qaadi karo ama wheel);
badeecadda gogosha (caag, aluminium, birta);
jarista dhererka, suurtagalnimada isbedelka.
Meel yar oo ku haboon habka qiimaha jaban ee leh qashin caag ah iyo xajmi dhexdhexaad ah (30-40 cm). Cawska cawska ah lama isticmaali karo cawska, maadaama aysan awood u laheyn in la hubiyo xitaa barafka.
Halkee cawska cowsku ka tagayaa?
Moodooyinka badankood, gooyaa cawska ayaa isla markiiba la tuurayaa (dhinaca ama dhinaca dambe). Ka dib markaad dhadhamiso, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado qashinka oo ka saar cawska - tusaale ahaan, godka compost.
Qaar ka mid ah cawska cawska ayaa leh sanduuq gaar ah, oo ka dhigaya dayactirka cawska la daaweeyey aad u sahlan. Sanduuqa ururinta ayaa noqon kara mid adag ama jilicsan (ikhtiyaarka ugu horeeya ayaa ah mid ku habboon).
Noocyo qaali ah ayaa lagu qalabeeyaa hawlaha mulching, marka cawska gooyaa la jajabiyo oo uu ku jiifsado cawska. Tani waa hab sahlan oo habboon oo loo tuuro qashinka waqti isku mid ah. Mulching waxaa lagula talinayaa cawska leh cawska jilicsan, cawska hoose, haddii kale xitaa shredded jirriduhu waxay sameeyaan tuubbooyin aan cidhiidhi ahayn oo weynaayeen muddo dheer.
Cawska wanaagsan - natiijada shaqada caadiga ah, goosashada iyo waraabinta waqtigeeda. Ha ka dhicin hadafka loogu talagalay, islamarkaana deg deggaagu wuxuu noqon doonaa sida sawirka.